ကြောက်ရွံ့ခြင်းတရားများကို အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကြောက်ရွံ့ခြင်းတရားများကို အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း…
Posted by Ko out of... on Dec 5, 2012 in Creative Writing |4comments
– လူတွေဟာ ဘ၀ရှင်သန်နေစဉ် အခိုက်အတန့်လေးမှာ…အောက်ပါအကြောက်တရားတွေနဲ့ ရှင်သန် နေထိုင်ကြရပါတယ်…
– စားဝတ်နေရေး အဆင် မပြေမှာကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း….
– မိဘဆွေမျိုးနဲ့ အမြင်မတူလို့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ငြင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမှာကြောက်ရွံ့ခြင်း…
– ပတ်ဝန်းကျင်လူမှု အသိုင်း အ၀ိုင်း၏ အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ မခံရမှာ ကြောက်ရွံ့ခြင်း….
– သူတစ်ပါးလို အဆင့် အတန်းမှီမှီ မနေရမှာကို စိုးရွံ့ခြင်း….
– ခြေလက်အင်္ဂါချို့ယွင်းမှာကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း….
– ရာထူးစည်းစိမ်အာဏာ စွန့်လွတ်ရမှာကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း….
– စည်းစိမ်းဥစ္စာဓန ပေါကြွယ်သူများကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း…
– သွေးတိုး၊ကင်ဆာ စသည် ရောဂါအမျိုးမျိုးကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း….
– ရန်သူ၊ သူခိုး၊ ဓမြကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း…
– မီး၊လေ၊ရေ ကြီးမှုကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း…
– မီးတောင်၊ဆူနာမီ၊ မြေငလျှင်နှင့် သဘာဝဘေးအန္တရယ်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း…
– အင်းဆက်ပိုးမွားကြောင့် ရောဂါကူးစက်ခံရမှာ စိုးရွံ့ခြင်း….
x နတ်ကိုင်ခြင်း၊ နတ်ပူးခြင်း၊ သူများပယောဂကြောင့် ပြုစားခံရခြင်း စသည်တို့ကိုကြောက်ခြင်း….
x သေပြီးရင် ငရဲတိရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာဖြစ်မှာကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း…
x သေပြီးရင် ကောင်းတဲ့ ဘုံဘ၀ မရောက်မှာကို စိုးရွံ့ခြင်း…
အထက်ပါကြောက်ရွံ့ခြင်းတရားကို လေ့လာကြည်ရင်…အောက်ဆုံး(၄) ခုဟာ…”အထင်” နဲ့ကြောက်ရွံ့နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်…ကျန်တဲ့ အထက်က အချက်တွေဟာ…”အမြင် “နဲ့ ကြောက် ရွံ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်…အမြင်နဲ့ကြောက်တာဟာ မြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်…အဲဒီလို မဖြစ်အောင် လက်တွေ့ အသိဥာဏ်တွေနဲ့ ပွားများပြီး မဖြစ်အောင်…ကာကွယ်လို့ရတယ်…အဖြစ်နည်းအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်…
မကြောက်သင့်တဲ့ အောက်က (၄) ခုကိုကြောက်နေကြဦးမယ်ဆိုရင်တော့…. အကြောက်တရားက ကင်းဝေးအောင်ဘယ်လောက်ဘဲဟော ….ဘယ်လောက်ဘဲပြောပြော…တကယ်အကြောက်တရားက…. လွန်မြောက်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး…ကိုယ့်ကိုကိုယ် အောက်ဆုံးက အကြောက်တရား (၄)ခုကနေ လွတ်မြောက် အရင်လုပ်ပြီးမှ ….သူတပါးကို လွတ်မြောက်အောင် ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း…တိုက်တွန်းအကြံပြုအပ်လိုက်ရပါသည်….
ကျုပ်တို့ကတော့ ရှင်းရှင်းပဲ ကြောက်မွေးပါ ဇာဂနာနဲ့ နှုတ်ဗြုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ
အမြင်နဲ့ကြောက်ရွံခြင်းတွေဟာ မကြောက်ရွံသင့်ဘူးလားဗျာ၊ ဒါတွေကို မကြောက်ရွံလို့ရှိရင်
ကောင်းမှာလား။ အထင်တွေပြောက်အောင်ရော ဘာနဲ့ဖျောက်ရမှာလည်း။ လူတွေမျက်စေ့လည်နေကြပြီ။
ဘယ်လိုများ ဘဝကို ရှင်သန်စေရမှာလည်း လုပ်ကြပါအုံး။
အထက်ပါကြောက်ရွံ့ခြင်းတရားကို လေ့လာကြည်ရင်…အောက်ဆုံး(၄) ခုဟာ…”အထင်” နဲ့ကြောက်ရွံ့နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်…
ကမ္ဘာမှာ.. ဟောလိဝုဒ်ကလုပ်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေအထဲ.. စူပါနယ်ချရယ်ကားတွေ.. (စူပါမန်း၊စပိုင်ဒါမန်း၊အာဗာတာ၊ (သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင် The Twilight Saga)၊ ဒစ်စနေက ပရင့်စ်လေးတွေ.. စတာတွေက.. သာမန်ထက်လွန်နေသူတွေ အကြောင်းမို့. နတ်တွေ..။ သရဲတစ္ဆေတွေလို့ ပြောလို့ရတယ်..။
တနှစ်..တနှစ်.. အဲဒါတွေပြတာ.. ကာရိုက်တာတွေထုတ်ရောင်းတာကနေ.. ရလိုက်တဲ့ဝင်ငွေဗျာ..
အကုန်ပေါင်း.. မြန်မာအမျိုးသားအားလုံးရဲ့..တနှစ် ဂျီဒီပီမက အေးဆေးရှိတယ်…။
အဲဒီမီဒီယာတွေနဲ့ ကမ္ဘာ့လူအများစု. အကြောက်တရား ..အချစ်တရားတွေဖြစ်အောင်လုပ်… ဟောလိဝုဒ်ကနေ ငွေတွေသဲ့ယူနေတာပေါ့…
ဆိုတော့… ဖျော်ဖြေရေးကို.. ဖျော်ဖြေရေးမမြင်ပဲ.. ကြောက်သူတွေ.. ကြောက်ကြပါစေနော..
Koyo ခင်ဗျာ…. အမြင်နဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းဟာရှိသင့်ပါတယ်…ရှိမှဘဲလူတွေဟာ ဒီ ဒုက္ခကနေ…အသက်ရှင်နေစဉ် အတွင်း သက်သာအောင် နည်းလမ်းရှာကြမှာဖြစ်ပါတယ်..
” ကြောက်စရာရှိပြီး မကြောက်ဘူးဆိုတာ သတ္တိမဟုတ်ဘူး….အဲဒါမိုက်တာ…ကြောက်စရာတကယ်မရှိတာကို သိပြီးမကြောက်တာကမှ သတ္တိလို့ခေါ်ပါတယ်”….
– အထူးသဖြင့်ကြောက်ရွံ့တဲ့နေရာမှာ ခံစားချက်ကိုကြည့်ပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ ပြုလုပ်ချက်အဆိုးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဘ၀ဒုက္ခအဆိုးကိုမြင်ပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုပြီး(၂)ပိုင်းခွဲကြည့်ဖို့လိုပါတယ်…ဥပမာဘိန်းစားဟာ..ခံစားချက်အရကောင်းပေမဲ့ ဘိန်းသမားဘ၀ဖြစ်ရတာဆိုးတာပေါ့…တချို့ကြတော့လည်း ခံစားချက်ကဆိုးပြီး..ဘ၀ကောင်းတာလည်းရှိတယ်…ဥပမာ..ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ရောဂါဟာ ခွဲစိတ်မှုလုပ်မှရမယ် ကိုယ်ကခွဲစိတ်လိုက်တယ်..ခွဲစိတ်တာ ခံစားချက်အရ နာပေမဲ့…ဘ၀ကြတော့ကောင်းသွားတာပေါ့…ဒါကြောင့်..လူ့လောကမှာ နေထိုင်ကြတဲ့အခါ.. ပြုလုပ်ချက်အဆိုးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဘ၀ဒုက္ခအဆိုးကိုမြင်ပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းဟာ လူ့လောက ငြိမ်းချမ်းဖို့ အထောက်အကူပြုပါတယ်…
– နောက်တခု..အထက်ပါ အမြင်နဲ့ ကြောက်ရွံ့ခြင်းတရားမှာ….လူတွေ အကြောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့…သေခြင်းတရားကို ကျွန်တော် ထည့်မရေးထားတာကိုကြည့်ရင်…သတိထားမိမှာပါ….ဘာဖြစ်လည်းဆိုတော့ …. အမြင်နဲ့ကြောက့်ရွံ့ခြင်း ဒုက္ခတွေဟာ ဘယ်သူမှရှောင်လွှဲလို့မရလို့ဘဲ.. .ရှောင်လွှဲလို့မရရုံနဲ့ ဒီလိုနေလို့ မဖြစ်ပါဘူး..တနေ့ဒို့လည်းသေရမယ်.. အသက်ရှင်စဉ်ဘယ်လိုကျင့်ကြံနေထိုင်ရမယ်.. .လောကဓံကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာလုပ်ရမှာ…. အခုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ…. သေတဲ့အခါ….. ဘယ်လိုသေရမယ် ဆိုတာဘဲ ပြင်ဆင်နေကြတာများတယ်.. .သေတာကိုယ့်အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး… သဘာဝတရားပါ..? သေရဲဖို့ဘဲလိုတယ်… .လူ့ဘ၀မှာ အသက်စဉ်ရှင် လူသားကောင်းကျိုးအတွက် တာဝန်ကျေတဲ့ လူအဖြစ်နဲ့ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကိုအောင့်မေ့ပြီးရဲရဲဝံ့ဝံ့ သေရဲပြီလား?… ငါသေတဲ့ အခါ…ခံစားချက်ဝေဒနာသိပ်မပြင်းအောင်. .ညင်ညင်သာသာနဲ့ သေရအောင်…. အသေအတွက် ခံစားချက်အကောင်းနဲ့ ထွက်သွားအောင် …ဝေဒနာဆုံးအောင် ငုတ်တုတ်ထိုင်တဲ့ အလုပ်ကို ထိုင်ကြည့်နေမလား?.. ဒီခံစားချက် အကောင်းနဲ့ညင်ညင်သာသာသေရအောင်… မေ့ဆေးထိုးပြီးသေရင်ကောမရဘူးလား?… ဒါတွေဟာစဉ်းစားစရာတွေဘဲဗျာ… .စာလည်းရှည်သွားပြီ…ကျေးဇူး…